I-STUDIO yangoku kwiZiko leMbali yaseMinsk
Yiza undwendwele iflethi yam entle yeStudio. Isanda kulungiswa kwaye yonke into intsha kwaye iyakhazimla. Isakhiwo selifa lemveli kwaye sakhiwa ngexesha le-Stalin. Ifumaneka entliziyweni yeMinsk, kanye kwi-Victory Square. Le ndlu inokuhlala abantu abayi-4 kwaye ixhotyiswe ngefenitshala entsha kunye nezixhobo zombane. Uya kuba nokufikelela kwezona ndlela zothutho zikawonke-wonke: i-metro, ibhasi, iteksi (ngaphakathi komzuzu omnye) kwaye kufutshane nazo zonke iindawo ezinomtsalane kwaye ujikelezwe ziipaki ezi-2 ezimangalisayo.
Uya kunandipha indawo yokuhlala ezolileyo. Indlu yenziwe ngezi: ~ikhitshi elinezixhobo (i-oveni, isitovu soveliso, ifriji, isikhenkcezisi, iketile, umatshini wokuhlamba izitya, umatshini wokuhlamba izitya kunye nazo zonke eziyimfuneko izinto zasekhitshini ukwenza uzive usekhaya)~Indawo yokutyela enetafile engqukuva yabantu abayi-4~Ukuhlala. Indawo enebhedi yesofa, iitafile ezisecaleni, isipili kunye neTV eshukumayo ~ Indawo yokulala enokukhanya okumfiliba kunye nebhedi ecocekileyo ecocekileyo ~ Indawo yeholo apho unokubeka khona izinto zakho iyilwe yinkampani yefenitshala ezimeleyo. ~Igumbi lokuhlambela elipholileyo elineshawari yokuhamba (iitawuli,ihairdryer,iphepha lendlu yangasese,ijeli yeshawari njl.njl zonke zinikezelwe). Indlu ixhotyiswe ngokufudumeza. Iindwendwe ziya kuba nokufikelela kwi-WIFI ekhawulezayo. Yonke into yenziwe ukwenza le ndawo ibe yeyona ndawo ikhululekileyo kwaye imnandi ngokuhlala.
4.95 · Izimvo eziyi-76
Kumgangatho ongaphantsi ngasemnyango ungafumana iCoffee House, Barber Shop kunye neGrocery store. Siku 1 min kude neMetro "Ploshcha Peramogy" kunye ne-10 mins ukuhamba kuyo nayiphi na into enomtsalane kumbindi wesixeko. Yindawo engakholelekiyo ngokwenene.
I-Victory Square-square embindini weSixeko saseMinsk esisekunqumla i-Independence Avenue kunye ne-Zakharau Street. Isikwere sikwiziko lembali laseMinsk elikufutshane kunye nemyuziyam ye-1st Congress ye-RSDLP, ii-ofisi eziphambili ze-National State TV kunye neRadio kunye neNdlu yoMtshato yeSixeko. Ipaki eluhlaza isuka kwi-Victory Square ukuya kumlambo waseSvislach kunye nokungena kwi-M. Gorky Park. I-Victory Square yeyona ndawo ibalulekileyo yaseMinsk.
Indlu yonke iyafumaneka kwiindwendwe zethu.
Ukuba kukho nayiphi na imibuzo nceda ungathandabuzi ukuqhagamshelana nam (ngaphakathi kweeyure ezifanelekileyo ngokuqinisekileyo 9am-9pm).